Awood-siinta Hab-Samaynta Dhismaha Afrika: Qalabka waara iyo isku-xirnaanta bulshada ee udub-dhexaadka u ah wax-abuurista Diébédo Francis
'Hab-Samaynta Dhismaha waxaa sida ugu wanaagsan loogu qiimeeyaa meesha u ku yaalo dhismaha - sida ula xiriiro cimilada, kheyraadka maxalliga ah, farsamooyinka dhismaha iyo xaaladdeeda dhaqan-dhaqaale.'
Diébédo Francis Kéré waa mid ka mid ah hab-sameyayaasha dhismaha Afrikaanka ah ee ugu caansan waqtiyadii dhawaa, iyo aqoon gaar ah ayuu leeyahay, naqshadeeyayaasha waara ayaa hogaaminaya wadahadalka caalamiga ah ee mustaqbalka dhismayaasha la tixgeliyo.
Waxa uu ku dhashay tuulada Gando, Burkina Faso, oo waxa dhalay guddoomiyaha tuulada, Kéré waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee beeshiisa ah ee taga dugsiga, ka dib waxa uu cilmiga hab-samaynta dhismaha ka bartay Jaamacadda Farsamada ee Berlin.
Dhismayaashiisu waxay u shaqeeyaan dhaqaale ahaan iyo cimilo ahaan, iyagoo si caqli-gal ah u isticmaalaya iftiinka iyo meelo bannaan si looga hortago xaaladaha cimilada adag ayadoo la isticmaalaayo tignoolajiyada soo jireenka ah iyo hidaha qaab-dhismeedka bulshada.
Isaga oo waqtigiisa u kala qaybinaya Burkina Faso iyo Berlin, halkaas oo iskudubarid u dhexeeya kooxdiisa Afrika iyo khubarada maxalliga ah uu ku maamulo istuudiyo, Kéré ayaa dhawaan la guddoonsiiyay abaalmarinta Pritzker, isagoo noqday Afrikaankii ugu horreeyay ee ku guuleysta abaalmarinta ugu sarreysa ee xirfaddiisa.
Ku soo noqoshada salkiisa
'Waan ogaa inaan waajib ku leeyahay dadkayga,' ayuu Kéré u sheegay The Guardian. 'Waxaan rabay in aan sameeyo wax kasta oo aan awoodo si aan u helo farsamo ku habboon oo aan ku dhiso dugsi, oo leh xaalad lala qabsado cimilada si lagu baxsho waxbarasho raaxo iyo dhab ah iyo xiiso.'
Maadaama waayo-aragnimadiisa ahaa fasalo hawada ku yar, oo ku dhisan shamiinto, Kéré wuxuu ku laabtay Gando si uu u ka dhiso dugsi hoose, isaga oo u ururiyay £20,000 dhismihiisa, kaasoo 2001-dii qayb ka ah mashruuciisii sannadka ugu dambeeyay ee jaamacadda.
Naqshadaynta dugsigu waxuu isticmaalaa agabka deegaanka, sida bulukeeti goobta lagu sameeyo (ka sameysan dhoobo iyo shimiinto), iyo saqaf dalool leh oo lagu kor saaray saqaf khafiif ah oo laalan si loo dhiirigaliyo hawo marid, iyadoo ay weheliso ka qaybgelinta bulshada habka dhismaha.
Wareysi uu siiyay Dezeen, wuxuu ku sheegay in ujeedadiisu ay ahayd 'in la abuuro dhismo ka jawaabaya sida ugu wanaagsan ee baahiyaha cimilada iyo baahiyaha dadka, iyadoo la adeegsanayo agabka ugu badan ee la heli karo'.
Habkan wax dhisidda wadajirka ah, ee ku salaysan bulshada ayaa bilaabay qaab-dhaqan waara oo Kéré tan iyo markii uu ka hirgeliyay Afrika oo dhan iyo adduunka intiisa kale.
Waa maxay sirta dhismo waara ah? Khayraadka deegaanka iyo ka qaybgalka bulshada
U dabaaldegga 'deegaanka', hab-samaynta dhismaha Kéré wuxuu caan ku yahay isku darka agabka maxalliga ah, dhaqameed iyo injineernimada teknoolojiyadda sare iyo aqoonta si loo sameeyo dhismayaal waara ah oo leh qaabab wax ku ool ah, yaab leh iyo qurux badan
Helitaanka taageerada iyo kalsoonida bulshada deegaanka ayaa udub dhexaad u ah hab-dhismeedka Kéré.
'Dadku waxay u baahan yihiin inay qayb ka noqdaan geeddi-socodka. Waxaan u tababarnaa dadka maxalliga ah inay agabka maxalliga ah u isticmaalaan si ka duwan si ay u abuuraan dhismayaasha. Aad bay u fududahay, laakiin waxtar ayuu leeyahay'.
Habkani waxa uu abuuraa fursado shaqo oo maxalli ah, la talin xirfadeed, iyo isku-duubni iyo aqoonsi bulsho.
Ku socda caalamiga, si joogo deegaanka
Dhismoyinka Kéréee aad loo aqoonsan karo waxay ku yeelaan dalkiisa iyo caalamiga.
Laga soo bilaabo naqshadihiisa Xarunta de Santé et de Promotion Sociale, Burkina Faso, oo la dhisay iyadoo la adeegsanayo qalabka maxaliga ah iyo nidaamyada tamarta waarta, ilaa Saldhigga Libaaxyada Bilawga ee Kenya oo naqshaddiisa laga tixraacey guryaha u dhiso aboorka, hal-abuurka Kéré ayaa si fudud ayuu ku milmaa deegaanka.
Caannimada caalamiga ah ee hab-samaynta dhismoyinka waxay ka timid dhismaha buluuga ah ee loogu talagalay 2017 Serpentine Pavilion oo loogu talagalay in la soo marsiiyo biyaha roobka si laga dhigo biyo-dhac, iyo 'Guriga Dabaaldegga' ama Sarbalé Ke Luqadda Bissa ee Burkina Faso, waxay ahayd dhismo u eg geedka baobab oo loo sameeyay Bandhig Faneedka iyo Muusiga ee Coachella 2019 ee dalka Maraykanka.
Muxuu mustaqbalka u keeni doonaa hab-sameeyaha dhismoyinka ugu abaal-marin badan Afrika?
'Waan isku xirannahay, welwelka cimilada, dimoqraadiyadda iyo yaraanta ayaa ah walaac aan dhammaanteen leennahay.'
Waxa oo aan caadi ahayn waxaa weeye in qaataha abaalmarinta Pritzker, oo inta badan yahay abaalmarinta guusha nolosha, dhismayaasha ugu hamiga badan ee Kéré ayaa weli soo socda.
Mashaariicda hadda jira waxaa ka mid ah Machadka cusub ee Goethe ee Senegal, xarun bulsho oo aad u saraysa oo loogu talagalay jaamacadda Munich, iyo mashruuciisa aad loo filayo; Baarlamaanka Qaranka ee Benin. Hadda oo dhismihiisu socdo, hoolka ayaa ka soo kacaya dhulka caasimadda, Porto-Novo, qaabkiisa waa geedka palaver oo qurux badan.
Mustaqbalka wada-shaqayn iskaashi ah, waara ah ee hab-samaynta dhismaha Afrika, iyo adduunka intiisa kale, wuxuu ku jiraa gacmo badbaado leh.
Jaantuus ku samaynta adduun internet laga dhax dhisay: Sida farshaxan-yaqaanada Afrikaanku ay ula qabsanayaan NFT-yada iyo goobta farshaxanka internetka Hadda aqri
Maalinta Afrika: Dabaaldegga guulaha iskaashiga dadyowga Afrika in ka badan 50 sanoHadda aqri
Caddaalada iyo sinnaanta. Qorshaha Afrika ee xuquuqda jinsiga iyo maalgelinta isbeddelka ayaa helay soo jiidashoHadda aqri
Hab fikir oo guul leh. Sheekadii ka dambaysay kacaankii kubbadda kolayga ee Afrika.Hadda aqri
Fayl xaqiiqo ah
FAYL XAQIIQO AH: Fashionomics: Isticmaalka awoodda dhaqanka iyo dharka AfrikaHadda aqri